Ity foto-kevitra ity dia mampiseho ny endriky ny fampiharana Weather ao amin'ny iPadOS | iPhone News
iPadOS Izy io dia tonga ho azy manokana ho an'ny iPad taona vitsivitsy lasa izay. Na izany aza, hatramin'izay ny iOS dia nampifanaraka ny filan'ny iDevices rehetra miaraka amin'ny tanjona hanomezana tontolo iainana feno kokoa. Nisy fetra anefa. Nandritra ny taona maro, niandry ny fampiharana Weather ofisialy ho tonga amin'ny efijery lehibe amin'ny iPad ny mpampiasa. Mifanohitra amin'ny nantenaina, tsy mbola nahita glimmer fanantenana izahay fa hitondra ny fampiharana amin'ny iPad i Apple. Ity foto-kevitra vaovao ity dia mampiseho ny endrik'ilay app Weather amin'ny iPad sy ny endri-javatra fanampiny azo apetraka.
Ny iPadOS 16 ve no fanavaozana misy ny fampiharana Weather ho an'ny iPad?
Ity hevitra vaovao ity navoakan'i Timo Weigelt tao amin'ny Behance santionany ny mety ho endriky ny fampiharana Weather amin'ny iPad. Raha vao jerena dia toa dika mitovy tsotra eo amin'ny fampiharana iOS amin'ny efijery kely kokoa. Na izany aza, ny fahasamihafana kely izay ampidirina manerana ny foto-kevitra dia hanome ny fanalahidy hanavahana ireo fampiharana roa.
Voalohany indrindra, azo amboarina ho toy ny widgets ireo sakana fampahalalam-baovao amin'ny alalan'ny fanampiana, ohatra, ny 'rotsak'orana' na 'toro-drivotra'. Amin'ity fiasa ity dia avelantsika mamorona efijery fotoana manokana mifototra amin'ny angona tianay ho fantatra amin'ny fotoana rehetra. fantatro koa dia hampiditra fomba fijery vaovao satria ny fampiharana ofisialy dia tsy manana endrika lanezy. Ity endrika ity dia mety tsara amin'ny efijery iPad miaraka amin'ny endrika tsanganana roa izay eo amin'ny ankavanana ny toerana hijerena ary eo amin'ny ankavia ny fampahalalana momba ny toetrandro.
iOS 16 dia hitondra fiovana lehibe amin'ny Focus Modes
Etsy andaniny, ampio sarintany vaovao mihetsika hafa noho ny an'ny rivotra sy ny rotsak'orana izay hanome fampahalalana bebe kokoa ho an'ny mpampiasa. Ary, farany, misy famantarana kely nampiana fa ny fampiharana dia noforonina amin'ny alàlan'ny Catalyst, izay koa dia mamela ny fitondrana ny fampiharana Weather amin'ny macOS vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » Ity foto-kevitra ity dia mampiseho ny endriky ny fampiharana Weather ao amin'ny iPadOS